Yakajeka uye Fungidzira Tekinoroji Mirayiridzo yakatsvaga chigadzirwa bhuku re19 Daewoo ruvara rweTerevhizheni (TV) Model DTQ 19V1FC, ine kure nekudzora. Ndakaona kuti bhuku iri rakanyorerwa marudzi e (30% off)
Yakajeka uye Fungidzira Tekinoroji Mirayiridzo yakatsvaga chigadzirwa bhuku re19 Daewoo ruvara rweTerevhizheni (TV) Model DTQ 19V1FC, ine kure nekudzora. Ndakaona kuti bhuku iri rakanyorerwa marudzi e
Yakajeka uye Fungidzira Tekinoroji Mirayiridzo - yakatsvaga chigadzirwa bhuku re19 Daewoo ruvara rweTerevhizheni (TV) Model DTQ-19V1FC, ine kure nekudzora. Ndakaona kuti bhuku iri rakanyorerwa marudzi ese evateereri, yepamusoro tech, low tech, uye lay. Kutaura kwaro kwaive kupfupi uye kwakajeka, kuchiita kuti zvive nyore kunzwisisa. Iye munyori akashandisa se-nhanho-nhanho maitiro ekuita mharidzo, inoyerera chaizvo. Chikamu chega chega chemiraira chinobata bhatani rakasiyana rekudzora bhatani nemashandisi azvo. Nzvimbo isina kunaka yakashandiswa zvakanaka kuburikidza nebhuku racho rese. Imwe neimwe yemifananidzo inoenderana padanho rekuita uye yakaiswa mushe kuti ibatsire. Peji rakaiswa parutivi kuitira yambiro, yambiro uye nengozi nekutsanangurwa kweimwe yechiratidzo chinoshandiswa...
12.36 KB (0.01 MB)